Xiangshan Chaoyu Machinery Manufacturing Co., Ltd. iri mune rimwe National pamusoro 100 mumaruwa muna Zhejiang Province Xiangshan County Industrial Park, Xiangshan kweItari rakanaka rakadzika guta. It zvakasimba muna Hangyong penzira iri kugadziridzwa, zvifambiso zviri nyore chaizvo.
Panguva ino, kambani ndokwenguva nharaunda anosvika mamiriyoni 1 mativi mamita. With yemhando kugadzirwa michina. Pashure pamakore achangopfuura, pamwe chichiitwa kukura uye kukura, pova yakatarwa itsva chigadzirwa kukura kugadzirwa mitsetse kushanda uye simba okutengesa samambure muna rimwe unyanzvi kugadzirwa chawo cabinet.
The kambani simba zvekushandisa simba, zvakakwana kubudiswa midziyo zvemaziso, chigadzirwa quality, vari maererano ISO9000 dzomunyika zvaanoda utariri pashure-okutengesa basa, kupa vatengi vane unhu zvinhu uye mabasa. Panguva iyoyowo, kambani kufunga zvemichina kuvandudza uye itsva chigadzirwa kukura, saka kuti chigadzirwa ari kutungamirira chinzvimbo indasitiri.
Company achava yokuisvonaka, inokwanisika mutengo uye kufunga basa sezvo bhizimisi chinangwa. In ichi, kambani vashandi dzose kambani yokutarisira uye kutsigira kambani wangu vatengi uye nevamwe kutaura nomwoyo wose!